Interview with U Win Tin – Is Suu all by herself? | MOEMAKA (stop) PRESS !!!
← Nonentity Monk Prisoner (2) – Ashin Panna Siri
APK – Discussing. →
မိုးမခ၊ ဇူလိုင် ၃၁၊ ၂၀၁၁
ဒီတပတ် ဆရာဦးဝင်းတင်နဲ့ စကားပြောဖြစ်တဲ့ဆီမှာ ဆရာ့ကျန်းမာရေးကိုပဲ အဓိကမေးဖြစ်ပါတယ်။ ယမန်နေ့က တွေ့ဆုံ စကားပြောတာဖြစ်တဲ့အတွက် ယနေ့ တနင်္ဂနွေနေ့မှာ အာရုံကြောတွေ နာကျင်တာ သက်သာစေဖို့ ဆေးထိုးရဦးမယ်၊ ဝေဒနာက အတော် သက်သာတယ်၊ သိပ်မကြာခင်မှာ ဆေးရုံက ပြန်ဆင်းဖြစ်မယ်လို့ မျှော်လင့်ကြောင်း ဆရာကပြောပါတယ်။ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးအောင်ကြည်နဲ့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် တွေ့ဆုံတဲ့ကိစ္စ၊ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ အိတ်ဖွင့်ပေးစာ ထုတ်ပြန်တဲ့ ကိစ္စနဲ့ ၈ လေးလုံး အရေးတော်ပုံ နှစ်ပတ်လည် နီးကပ်လာတဲ့ကာလမှာ အရေးတော်ပုံကြီးက မွေးဖွားလာတဲ့ နိုင်ငံရေးပါတီတရပ်အနေနဲ့ ခေါင်းဆောင်တွေ ဖမ်းဆီး ချုပ်နှောင်မှုက လွတ်မြောက်ပြီး ပထမဆုံး ကြုံတွေ့ရမယ့် နှစ်ပတ်လည်မှာ ဘယ်လိုမျိူး မျှော်လင့်ထားတဲ့ ဆိုတဲ့ အကြောင်းတွေကို မေးဖြစ်ပါတယ်။ ကောက်နုတ်ဖော်ပြပြီး ပြန်လည် ဖော်ပြရသည် ရှိသော် –
ကောင်းပါတယ်။ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးကြတယ်ဆိုတာ။ အဲသည်မှာ ဆွေးနွေးတာ ၃ ချက်ထဲမှာ ဥပမာအားဖြင့် ၂ ချက်ကို အဓိကထားဆွေးနွေးတယ်ဆိုရင် – ဒါတွေက တရားဥပဒေ စုိုးမိုးရေးနဲ့ အများပြည်သူအကျိုးဖြစ်ထွန်းစေဖို့ ၂ ချက်တည်းကို ဦးတည်ပြီး သက်သက်ဆွေးနွေးတယ်သာဆိုရင် လက်ရှိအစုိုးရက ရှေ့မှာ ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးကတဆင့်ပြောနေသလို နိုင်ငံရေးပါတီတရပ်ရဲ့ တရားဝင် ရပ်တည်မှုကို အဓိကထား ဆွေးနွေးတယ်လို့ ကောက်ချက်ဆွဲနိုင်မှာ ဖြစ်တယ်။ သုို့သော် အခုဟာက စိတ်ဝမ်းကွဲပြားမှု ပပျောက်စေရေးကိုပါ ရည်ရွယ်ဆွေးနွေးတယ် ဆိုတော့ ခုနင်ကထက် ကျယ်ဝန်းတဲ့ ဆွေးနွေးမှုတွေ ဖြစ်နိုင်တယ်လို့ မှတ်ချက်ပေးနိုင်ပါတယ်။
Posted by oothandar on July 31, 2011 in Interview, U Win Tin